नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : Breaking News.......नेपाली काङ्रेसका सभापति एबम पूर्व प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको दु:खद निधन !
Breaking News.......नेपाली काङ्रेसका सभापति एबम पूर्व प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको दु:खद निधन !
नेपाली काङ्रेसका सभापति एबम पूर्व प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको दु:खद निधन भएको छ । कोइरालाको हृदयघातका कारण निधन भएको पारिबारिक श्रोतले नेपाल मदर डट कमलाई फोनमा बताए पनि चिकित्सा प्रबिधी अनुसार उक्त कुराको पूस्टि हुन बाँकी छ । कोइरालाको मंगलबार बिहान १२ बजेर ५० मिनेटमा निधन भएको महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले जानकारी दिए । यसैबीच कांग्रेसले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा जारी निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।
उहाँ सोमबार काठमाडौं कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्न आउने कार्यक्रम भए पनि पछि आउन सक्नु भएको थिएन । उहाँले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकामा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी फर्कनुभएको थियो । अमेरिकाको न्यूयोर्क्स्थित मेमोरिएल स्लोन केटरिङ क्यान्सर सेन्टरमा उनको छाती, जिब्रो र घाँटीको एक्सरेसहित अन्य परीक्षण गरिएको थियो । उहाँका स्वकीय सचिव अतुल कोइरालाले सभापति कोइरालाको निधन भएको पुष्टि
झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री: उहाँको निधनको दुखद खबर मैले राती सुने । त्यो खबरले म अत्यन्त मर्माहत भएँ । उहाँको नेपाली कांग्रेसको सभापति र पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुहुन्थ्यो । उहाँको कांग्रेसको शालीन र सादगी नेताको प्रतीकको रुपमा नेपाली कांग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ताले उहाँलाई उच्च सम्मान गर्दथे । त्यस्तो नेताको निधन देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति ठूलो क्षति हो । उहाँप्रति नेकपा (एमाले)को तर्फबाट र मेरोतर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । नेपाल अहिले संविधान निर्माणमा कोइरालाको योगादान नेपालको इतिहासमा अविस्मरणीय रहने छ । उहाँले लोकतन्त्रका निम्ति लोकतन्त्र स्थापना र विकासका निम्ति उहाँले अत्यन्त ठूलो योगदान दिनुभएको छ ।
रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति, नेपाली कांग्रेस: सुशील कोइरालाले अत्यन्त निष्ठानवान्, त्यागी र लोकतन्त्रका लागि अठान लिने होनाहार नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँको निधनले नेपाली कांगे्रस, नेपाली जनता र पार्टी पङ्क्ति मर्माहत भएको छ । सामान्य परिवारमा जन्मेर नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सफल हुनु भएका कोइराला नेपाली जनताको हित र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन अविचलित रहनु भयो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उहाँले पु¥याएको योगदानलाई म उच्च सम्मान गर्दछु । उहाँको निधनमा शोकमा हरेका तमाम नेता तथा कार्यकर्तालाई धैर्य र संयम रहन अपिल गर्दछुृ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड: सुशील कोइरालाको निधनको खबर एउटा आकस्मिक खबर जस्तो भयो । म त धनकुटामा थिएँ । यसले हाम्रो पार्टी र मलाई स्तब्ध भएको छ । उहाँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा अथक योद्धाको रुपमा स्थापित नेता हुनुहुन्छ । उहाँले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा खेलेको भूमिका आम नेपाली जनतालाई प्रस्टरुपमा थाहा नै छ । पछिल्लो चरणमा संविधानसभामा संविधान बनाउने क्रममा ठूलो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा स्मरणीय भूमिका खेल्नुभएको छ । राजनीति र देशकै समर्पित नेताको रुपमा उहाँले आफ्नो छवि बनाउनु भएको छ । उहाँको निधनले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । सबै राजनीतिक शक्तिको एकताको खाँचो रहेको बेलामा उहाँसँग कुरा हुँदा राष्ट्रिय एकता हामी सबै मिलेर नै संविधान कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुननिर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँले एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो । उहाँको निधनले यस प्रक्रियामा ठूलो क्षति पुगेको छ । स्वर्गीय कोइराला प्रति नेपाल मदर डट कम परिवार हार्दिक श्रध्दान्जली ब्यक्त गर्दछ ।